‘ए बाबा...कसले खाली भन्यो र भन्या ? कहाँ खाली छ ढुकुटी ? पहिले राम्ररी ढुकुटी हेर्नु त प¥यो नि । हेर्दै नहेरी त्यसै खाली भन्ने ?’ उहाँको गाला रातो हुँदै आउन थाल्यो ।
‘हेर्दै नहेरी त भनेको होइन होला सभापतिज्यू...’ अहिले प्रश्न राख्ने शायद एमाले समर्थक होला ।